CT sy CST : rafitra mpanangan-tanana fotsiny , mpandany volam-bahoaka ! – MyDago.com aime Madagascar
CT sy CST : rafitra mpanangan-tanana fotsiny , mpandany volam-bahoaka !
Niatrika ny fivoriana tsy ara-potoana ireo mpikambana ao amin’ny parlemantera roa tonta nanomboka androany. Ny maraina no nanomboka izany ny tao amin’ny CT ary ny tolakandro kosa ny tao amin’ny Cst. Tsy mihoatra ny fito andro ity fivoriana tsy ara-potoana ity izay hiompana betsaka amin’ilay volavolan-dalàna momba ny fanavaozana ny mpikambana ao amin’ny CES. Ho an’ny Ct dia fantatra fa androany hariva no niditra ao anatin’ny asam-baomiera ireo mpikambana ao amin’ny Ct ka handalo eo anivon’ny kaomisiona misahana ny lalàna ity volavolan-dalàna manova ny mpikambana CES ity. Ny Alatsinainy 29 Jolay 2013 kosa no handalo eo anivon’ny fivoriana azon’ny besinimaro atrehina izy io. Raha tsiahivina dia toy izao ny vontoantin’ity volavolan-dalàna manova ny CES ity. Ny volavolan-dalàna laharana 013.2013 ny 24 jolay teo no manova ny fepetra sasantsany amin’ny lalàna 2012-014 ny 30 Jolay momba ny CES.
Mba hisian’ny fifampitokisana amin’ny fifidianana sy hampirindra tsara izany fifidianana izany ary mba hamerenana ny hasin’ny fitsarana dia ireto ny andiny nisy fiovana araka ny volavolan-dalana navoakan’ny filankevitrin’ny ministra omaly. Ao amin’ny andininy voalohany dia ny CES no manapaka ny maha ara-dalàna ny fifidianana filoham-pirenena voalohany amin’ny Repoblika fahefatra sy ny maha ara-dalàna ny fifidianana solom-bavam-bahoaka amin’ny Repoblika fahaefatra ary manam-pahefana handinika ny fitakiana sy famakiana ady mifandraika amin’ireo raharaha-mpifidianana ireo.Ny CES no mamoaka ny vokam-pifidianana raikitra amin’ireo fifidianana roa ireo. Ny CES dia foana avy hatrany raha vao voadinika daholo ny fitakiana rehetra ary raha vao mivoaka ny vokam-pifidianana raikitra mahakasika ireo fifidianana ireo. Ao amin’ny andininy faha2 fanavaozana ny CES, ahitana mpikambana 19 izay voafaritra toy izao mpitsara 6 am-perin’asa, olona 10 tendrena eo anivon’ny vondrona nanao sonia ny tondrozotra, ary noho ny fananan’izy ireo traikefa momba ny lalàna sy amin’ny maha mpahay lalàna azy ireo no hanendrena azy ireo. Mpanolontsaina iray avy ao amin’ny HCC izay fidiana amin’ireo mpanolontsaina miaraka aminy ihany. Admnistratera sivily am-perin’asa iray dia ny fianakaviamben’ny adminisitratera sivily, mpampianatra mpikaroka iray izay manam-pahaizana manokana amin’ny droit public avy amin’ny Oniversitém-panjakana notendrena amin’ny alalan’ny kaoferansa ny prezidà, ny mpikambana manokana ao amin’ny CES amin’izao fotoana izao dia tsy afaka milatsaka hofidiana intsony. Ny tsy fisian’ny fanolorana olona avy amin’ny vondrona niaviny dia tsy sakana amin’ny fampandehanan-draharaha amin’ity fitsarana manokana ity. Ao amin’ny andininy faha 3: asiana fanavaozana ny filohan’ny CES dia fidian’ny mpikambana ao aminy ihany ary manana ny grady mpitsara laharana voalohany mandrafitra izany.Ao amin’ny andininy faha 6 : ny andraikitra maha mpikambana ao amin’ny CES dia tsy azo ampirafesina amin’ny andraikitra maha mpikambana amin’ny andrim-panjakana ary amin’ny fandrafetana raharaham-panjakana sy amin’ny maha olom-boafidy azy. Raha toa ka tafiditra amin’ireo tranga tsy azo anoharana ny mpikambana iray dia midika fa fitsoahana avy hatrany ny asa teo aloha. Ao aorian’ity fivorian tsy ara-potoana ity izany vao ho fantatra ny mahakasika ny CES izay. Marihina fa rehefa lany eo anivon’ny Ct ity volavolan-dalàna ity dia hampandalovana eny amin’ny Cst ary handalo fankatoavana eny amin’ny HCC, izay vao mandalo eo amin’ny filohan’ny tetezamita ny famoahana azy.
Ny azo ambara amin’ity fanoloana ny mpikambana ao anatin’ny CES ity dia ny lalàna navoakan’ireto parlemanta roa ireto no nahatonga io CES amin’ny endriny izao koa mahagaga no mbola handalo eo aminy indray ny fanovana azy, rahampitso sy afaka rahampitso ihany koa dia mbola hodinihina fanintelony io raharaha io satria parlemanta mpanangan-tanana fotsiny ny eto amintsika, sady tsy mahay no tsy matotra ara-politika mihitsy.
Précédent Article précédent : Lalao Ravalomanana à Valihazo avec le SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ANTSINANANA PPAA 12 le 25 juillet 2013
Suivant Article suivant : Kandidà Laza Razafiarison : naverina eny Antanimora indray